अटो क्षेत्र राज्यको विकासको सारथी:: Artha Dabali
कृष्ण प्रसाद दुलाल , उपाध्यक्ष (नाडा)
नेपालमा पछिल्लो समय अटोमोवाइल्स क्षेत्रको व्यवसाय फष्टाउँदो छ । प्रत्येक वर्ष राज्यलाई अटो क्षेत्रबाट आउने राजश्वको तथ्याङ्कले पनि पुष्टि गर्दछ ।
बदलिदो समाज फेरिदो संस्कृति नेपालीको आम्दानीमा भएको बृद्धिले पनि अटो बजारको बिक्रि ग्राफ उकालिदो छ ।
राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको प्रमुख आधार नै बनेको देखिन्छ । विज्ञान प्रविधि र विश्वव्यापिकरणको लहर बढेसंगै नेपालमा पनि विस्तार भएको अटो बजारबाट राज्यले पनि आम्दानीको दायरा वढाउने अवसर पाएको छ ।
अटो क्षेत्रबाट आर्थिक वर्ष २०७४/ ७५ मा राज्यले २३ अर्व ६४ करोड ९९ लाख १९ हजार रुपैंया राजस्व संकलन गरेको छ । सात वटै प्रदेशका यातायात कार्यालयबाट उक्त राजस्व उठेको यातायात व्यवस्था विभागको तथ्याकंमा उल्लेख छ ।
सवारी साधनको बजार विस्तार गर्नमा नाडा मोबाइल्स एसोसिएसन अफ नेपालले हरेक वर्ष गर्दै आएको ‘नाडा अटो सो’ को ठूलो भूमिका रहेको अटो व्यवसायीहरु बताउँछन् । सवारी साधनको ‘कुम्भमेला’ मानिने नाडा अटो सो १० भदौदेखि शुरु हुदै छ ।
नाडा अटो मोबाइल्स एसोसिएसन अफ नेपालको आयोजनामा हुने मेलामा सवारीसाधनहरुको भव्य प्रदर्शनी हुन्छ । यो नाडा अटो शो को १४ औँ संस्करण हो । यसपटकको शोमा १ सय ६० वटा स्टल र ब्लकहरु रहने आयोजकले जानकारी दिएको छ । प्रस्तुत छ यसै सन्दर्भमा नाडाका उपाध्यक्ष कृष्ण दुलालसंग अर्थडवलीको लागि तारा वाग्लेले गरेको कुराकानीको सारासं :
तपाईको दृष्टिमा हाल अटो क्षेत्रको अवस्था कस्तो पाउनु हुन्छ ?
अहिले यस क्षेत्रको बजार विस्तार राम्रो र सकारात्मक रुपमा अगाडी बढेको छ । पछिल्ला दिनमा सरकार पनि सकारात्मक बन्दै गएको १० लाखले रोजगारी पाएको यस क्षेत्रले राजस्वमा पनि राम्रो योगदान दिएको छ । यस क्षेत्रलाई अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड नै मान्नुपर्छ  ।
अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाएको यस क्षेत्रलाई सरकारल भने गम्भिरतापूर्वक लिएको पाइदैन । सरकारले यस क्षेत्रको नियमन र व्यवस्थापनको लागि उचित र प्रभावकारी नियमन बनाउदा यस क्षेत्रका व्यवसायी समस्यामा पर्ने गरेका छन् । अहिले त सरकारले ‘टि आर लोन’मासमेत कडाइ गरेकाकारण व्यवसायीलाई समस्या परेको छ । ‘स्पेयर्स पाट्र्स’लाई लोन नदिने नियमले उद्योगहरु वन्दहुने खतरा बढेको छ ।
सरकारले ‘टि आर’ लोनमा कडाइ गर्नुको कारण के हो ?
सरकारले व्यापार घाटा पूर्ति गर्न आयात घटाउने र निर्यात बढाउने भनेर यस्तो नियम ल्याएको हो । निर्यात बढाउने भन्दैमा यहाका व्यवसायीलाई समस्यामा पर्ने गरी नियम ल्याउनु हुदैन ।
वरु सरकारले यहाँ नै स्पेयर पाट्र्सका उद्योग संचालनगर्ने र सवारी आयात कमगर्ने नीति लिनु पर्छ । मुलुकको आर्थिक समृद्धिको लागि सरकारले गरेका कार्यक्रममा यातायात क्षेत्रको पनि भूमिका हुन्छ । सरकारले कतिपय अवस्थामा बुझेर कर लगाएको छ ।
कति नबुझेर लगाइएको पाइन्छ ।
अटोमोबाइलमा सडक मर्मत भनेर वार्षिक कर लगाइएको छ । सरकारले यो क्षेत्रमा नयाँ उद्योगको विकास र विस्तार गर्ने भन्दापनि भएका उद्योग धरासायी हुने खालका नियम ल्याइदिदा आर्थिक चलाएमान हुन सक्दैन ।
त्यस्तै, यातायात क्षेत्रमा देखिएको खास चुनौति के हो ?
यातायातका लागि मुख्यचुनौती भनेको सडक पूर्वाधार हो । सडक विना यातायातको कल्पना पनि गर्न सकिँदैन । राष्ट्र बैंकले तरलताको अभाव देखाउँदै लगानीमैत्री वातावरण नबनाएको हामीले बारम्बार बताउँदै आएका छौँ । हामीले उठाएका कतिपय मुद्दामा सरकार गम्भिर भएको देखिन्छ तर सरकारले जति चासो दिनुपर्ने हो त्यति दिएको छैन ।
सरकार र राष्ट्रबैंकका नीति र व्यवस्थाले गर्दा उद्योगी व्यवसायीले नोक्सानी व्यहोर्नुपर्नेे अवस्थाआएको छ । सरकारले मुलुक भित्र औद्योगिक वातावरण बनाउन खोजेको देखिएको छ । सरकारले गाडी बढी आयात गरेको आरोप लगाएर आयात कम गर्ने अनेक व्यवस्था ल्याउछ तर यहीं पूर्वधार विकास गर्ने र नयाँ उद्योग स्थापना गर्नेतर्फ ध्यान दिदैन ।
यातायात क्षेत्रका उद्योगहरु नेपालमै स्थापित गर्न र सवारी आयात कम गर्नेतर्फ यस क्षेत्रका व्यावयायीले पनि ध्यान दिनुपर्ने होइन र ?
नीति बनाउने सरकारले हो । उद्योग मैत्रीवातावरण र पूर्वाधार विकास गर्ने पनि सरकारले हो । व्यासायीले त सरकारले जस्तो व्यवस्था र वातावरण बनाइदिन्छ सो अनुरुप आआफ्नो उद्योग चलाएका हुन्छन् । यहाँ जमिन नहुँदा, सडक नहुँदा, औद्योगिक विकास हुन सकेको छैन । औद्योगिक व्यवसाय ऐनलाई आर्थिक ऐनले काटेको छ । कतिपय अवस्थामा उद्योगीले औद्योगिक व्यवसाय ऐनले दिएका सुविधा समेत पाउन सकेका छैनन ।
उत्पादनमूलक वस्तुमा आयकरमा २० प्रतिशत छुट दिने उद्योग ऐनमा स्पष्ट व्यवस्था छ, तर आर्थिक ऐनले काटेको छ  । अटोमोबाइलको बजारलाइ यस्ता व्यवस्थाले असर गरेको छ । सरकारले उद्योग धन्दा विस्तारको लागि समयानुकूल व्यवस्था, ‘स्किम’ र वातावरण वनाइदिएमा व्यवसायीले पनि सो अनुरुप आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्थे । तर सरकारले व्यवसायीलाई उत्प्रेरित गर्ने भन्दा पनि व्यवसायीको मनोवल घटाउने काम गरेको छ ।
यातायत क्षेत्रका समस्या कम गर्न र यस क्षेत्रका उद्योगको विकास र विस्तारको लागि नाडाको भूमिका महत्व के छ ?
सवारी साधनको व्यापार विस्तारको लागि हरेक वर्ष नाडा अटो सो गरेका छौं । सवारी व्यवस्थापन होस सर्वसाधारण सबैको पहुँचमा सवारी पुगेस् र यस क्षेत्रको व्यापार विस्तारसंगै राज्यको अर्थतन्त्र पनि मजवुत होस भनेर सवारी साधनको विक्री बढोस् भनेर यस्ता सो गर्ने गरेका हौं ।
तर, अटो मोवाइल्सको छाता संगठन नाडाले त आयात गरेका सवारीको व्यापारको लागि मात्रै नभएर स्वदेशमै सवारी उद्योग स्थापनाको लागि पनि जोड दिनु पर्ने होइन र ?
नाडाले नेपालमै सवारी बनाउने गरी उद्योग स्थापनागर्नेतर्फ चासो नदिएको होइन । तर सरकारले उद्योगमैत्री वातावरण बनाएको छैन । सवारीका लागि चाहिने सवै पाटैपूर्जा आयात गर्नुपरेको छ । नेपलमै सवारी वनाउदालाग्ने ‘कस्ट’ भन्दा विदेशबाट आयात गर्दा लाग्ने ‘कस्ट’ कम पर्छ अनि यहाँ वनाउनु भन्दा आयात गर्नेमै व्यवसायीको ध्यान हुन्छ ।
सरकारले पूर्वाधार र नीति बवनाउदा यस्तो भएको हो । सरकारले चासो नदिएकै कारण भएका उद्योग पनिबन्द छन् भने नयाँ बन्न त वातावरण नै छैन ।
स्वदेशमै स्पेयस पाट्र्स र लुब्रीकेन्ट उद्योग खोल्न सके पनि नेपालमै सवारी बनाउन सकिन्थ्यो । सरकारले साच्चै नै आयात कमगर्न र निर्यात बढाउन खोजेको हो भने उद्योग धन्दा खोल्ने स्पष्ट नीति र प्रविधिको विकास गर्नुपर्छ ।